Nokia 3310 2017 သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ Nokia ၏ဒဏ္ofာရီပုံပြင်များပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အသေးစိတ်နှင့်စျေးနှုန်းအားလုံးကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည် Androidsis
အကယ်၍ သင်ဟာအသက်ကြီးပြီးသင့်အတွက်မမေ့နိုင်သောမိုဘိုင်းတစ်ခုအကြောင်းသင့်ကိုမေးလာရင်သင့်ရဲ့အဖြေကဒဏ္myာရီဆန်ဒနှင့်ဒဏ္Nokiaာရီဆန်သော Nokia 3310 ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ရောင်းအားယူနစ်သန်း ၁၂၀ ကျော်။ ကောင်းပြီ၊ ငါပြောခဲ့ရင် Nokia ရဲ့ဒဏ္legာရီကဒီအသစ်နဲ့ထပ်မံထမြောက်လာမယ်လို့ငါပြောရင်မင်းဘာပြောမှာလဲ Nokia 3310 2017?.
မူအရအခြေခံအားဖြင့်ခေတ်ဟောင်းမိုဘိုင်းဖုန်းသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်မည်မျှအောင်မြင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ non- စမတ်မိုဘိုင်းဖုန်း ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်စမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းများကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပေးသည်မှာရှင်းပါသည်။ ၎င်း terminal နှင့် mobile device သည်စျေးနှုန်း၊ ဒီဇိုင်းနှင့်၎င်းနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများမှ စတင်၍ သင့်ကိုလျစ်လျူရှုမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီနေ့ရဲ့အစွမ်းထက်ပြီးအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ကြည့်ပါ။ အတိတ်ကဖြစ်ရပ်များနှင့်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသာဖြစ်သည် တစ်ခါတစ်ရံလက်ကိုင်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်မိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်သည့်လတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အချို့မှတ်မိကြသည့်အကြိမ်များ.
တစ်လကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Nokia 3310 2017 ၏အကောင်းဆုံးတင်ဆက်မှုစာဖြစ်သည်
Este Nokia 3310 2017 သည်မူလမူလ Nokia 3310 ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြုလုပ်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုလာသည် အရာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဖောင်းပွပြီးသန်း 120 ကျော်ယူနစ်ရောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဒီဇိုင်းပုံစံမှာပိုမိုခေတ်မီဆန်းပြားပြီးခေတ်မီပုံသဏ္itsာန်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုမပျောက်စေဘဲဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အဆိုပါအတွင်း Nokia 3310 2017ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်အလွန်မျှတပြီးလုံလောက်သောအချက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလေ့လာသုံးသပ်သောကွဲပြားသော Android terminals များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်အားအကြောင်းကြားပေးသောထိုဇယားများထဲမှတစ်ခုကိုပင်ဖန်တီးရန်စိတ်ရှုပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းကိုရှာသည် 2G ဆက်သွယ်မှု နှင့်တစ်ခုတည်းသော SIM နှင့် DualSIM မော်ဒယ်များ 2.4 Q QVGA resolution ဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောမျက်နှာပြင် အကယ်၍ သင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြားသိရလျှင် internal MB နှင့် 16 MB ထက်မပိုသောမှတ်ဉာဏ်တို့လည်းရှိသည်။ သိုလှောင်မှုမှတ်ဉာဏ်၏ 16 megabytesဆိုလိုသည်မှာ MicroSD မှ 32 Gb အထိအများဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်၎င်းသည်မယုံနိုင်စရာကင်မရာနှင့်2Mpx resolution ထက်နည်းသောဓာတ်ပုံများကိုသာသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။
ဤ ပမာဏ ၃၂ ဂစ်ဂါဘိုက်ရှိသော microSD သည်သန်းနှင့်ချီသောဓါတ်ပုံများကိုကယ်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပြုလိမ့်မည် ၂.၂ mpx resolution ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဂီတကိုသိုလှောင်ရန်နှင့်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များအတွက်2mm jack socket မှတဆင့်သို့မဟုတ်၎င်းမှတစ်ဆင့်၎င်း Nokia 3310 2017 ကို Mp3 player အဖြစ်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။ Bluettoth 3.0 ဆက်သွယ်မှု ကေဘယ်ကြိုးမပါဘဲနားကြပ်ချိတ်ဆက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်တော်ယာဉ်၏လက် - အခမဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။
နားကြပ်ကို jack မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုကိုရွေးချယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသင်သိသည် FM ရေဒီယို ဤနားကြပ်များသည် FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ချက်ကိုယ်တိုင်နားထောင်ရန်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ခံသောကြောင့်၎င်းတို့သည်လက်ခံသည့်အင်တင်နာအဖြစ်လည်းအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
ငါအရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ Nokia 3310 2017 အသစ်မှာ FlashLED ပါ ၀ င်သည့်2mpx resolution ရှိသောနောက်ကင်မရာပါ ၀ င်သည်ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကရိုက်ယူခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အရောင်များထွက်လာသည့်ဓာတ်ပုံကဲ့သို့သောဓါတ်ပုံများကိုခွင့်ပြုမည့်ကင်မရာ၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတွင်ပိုကောင်းသောဘာမျှမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသတိရရမည်။
၎င်း၏အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် 1200 mAh ဘက်ထရီဒီကိန်းဂဏန်းများကိုငါတို့အသုံးမပြုရသေးသောအချက်အလက်များကိုကြက်တူရွေးအားပေးသည် အားသွင်းစရာမလိုဘဲတစ်လအထိအသင့်စောင့်ဆိုင်းနေသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ၂၄ နာရီဆက်တိုက်စကားလက်ဆုံပြောဆိုနိုင်သည်။ ချစ်စရာဘာမှမရှိဘူး !!
တစ် ဦး အဘို့ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုယူရို ၅၀ ထက်မကျော်လွန်စေရန်အများပြည်သူအားရောင်းချသည့်စျေးနှုန်းအရောင်းအဆင့်စကားပြောခြင်းသည်ရာသီ၏အံ့အားသင့်စရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ထားသောဒဏ္thာရီဆန်သော 8-bit console mini Nintendo NES အသစ်၏လက်ခံမှုကိုတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အားလုံးရောင်းအားမှတ်တမ်းများကိုချိုးဖျက်ခဲ့သည် သင်လိုချင်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ retro ကိုဖက်ရှင်ကျကျဝတ်သည်။
တဖန်သင် Nokia 3310 2017 ကိုဝယ်မည်လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Nokia 3310 2017 သည်လက်တွေ့ကျပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Nokia ၏ဒဏ္endာရီပုံပြင်များကိုပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်
Joshua Sacristan ဟုသူကပြောသည်
ငါကမ်းခြေကိုသွားဖို့သေချာဘို့ဝယ်ပါလိမ့်မယ် ချိတ်ဆက်ပါ၊ တေးဂီတကိုနားထောင်ပါ၊ သင့်မိုဘိုင်းမှယူရို ၆၀၀ ယူမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲနားထောင်ပါ။
Josue Sacristan အားပြန်ပြောပါ
Android ဖြင့်လား ??
ပီ Ro သို့ပြန်သွားရန်
ဗစ်တာ Daniel Vargas Ybaja ဟုသူကပြောသည်
Víctor Daniel Vargas Ybaja အားပြန်ကြားချက်
Hugo Arthug အားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့၊ တစ်ယောက်ကျလိမ့်မယ်၊ iPhone ဟာတစ်ပတ်ရစ်ဈေးကွက်သို့သွားသည်